ဘလော့ခ်ဂါ တစ်ယောက်အတွက် အနုပညာဆိုင်ရာ အညမညဖြစ်စဉ်တရား – AHUNT BHONE MYAT
အခြားတစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်း ဥရောပမှာ ကာမက်စ်နဲ့ အိန်ဂျယ်တို့ရဲ့ ကွန်မြူနစ်ကြေညာစာတမ်းနဲ့ ရှုပ်ရှပ်ခက်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ရဲ့ “ဘောလယ်” ကဗျာခေတ်ကို ထူထောင် နေချိန်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုရဲ (ဆရာသစ္စာနီ) က ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ဥရောပရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆီကနေထွက်ကျလာတဲ့ ကြွေးကျော်သံတစ်ခုဟာလည်း အခုအချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့ နားထဲမှာကြားနေရတုန်းပါ။ ဘာလဲဆိုလိုရင် “အနုပညာဟာ အနုပညာအတွက်” ဆိုတဲ့အရာကို ဆွဲငင်ယူဆောင်ရင်း စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ကနေ လျှောင်ခွာချင်သူတွေ ဒီစကားလုံးကို အသုံးများလာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေဟာ ခေတ်တစ်ခေတ်ထဲမှာ ပြီးဆုံးသွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် မှတ်ကျောက်တင် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြ တာမျိုးတွေပါ။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ကိုကျော်စိုး (မင်းခိုက်စိုးစန်) ကို မေးခွန်းအချို့မေးခဲ့ဘူးတယ်။ သူက “ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့အနုပညာ ပစည်းတွေရဲ့ တန်ဘိုးကို နောင်တစ်ခေတ်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပါစေတော့လို့ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ် တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘာသာစကားတွေတောင် မသေခြာတော့တဲ့ လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ပြောပြော ဖြစ်လာမယ့် ခေတ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းမြင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို အဲ့ဒီခေတ်လူတွေ လက်ခံနိုင်မှ လက်ခံတော့မယ်။ ဒီတော့ ကျွန် တော်တို့ဟာ အခုဖြစ်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အနုပညာဖန်တီးမှုမျိုးကို စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ် အကောင်း မြင်စိတ် စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လုပ်သင့်တယ်။” လို့ ကျွန်တော်နဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့ဘူးတာကို သတိရမိပါတယ်။
7 thoughts on “ဘလော့ခ်ဂါ တစ်ယောက်အတွက် အနုပညာဆိုင်ရာ အညမညဖြစ်စဉ်တရား”
ဟုတ်ကဲ့….. တင်ပြချက် ကောင်းပါ၏….
“လော့ခ်ရေးသားခြင်းဟာ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကို ဖန်တီးတယ်ဆိုတယ်ဆိုကြပါစို့…. အဲ့ဒီဘလော့ခ်မှာရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်တွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအား လုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ကြရပါမယ်။ ဒါအပြင် ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်လို့ဆိုရမယ့် ရေးသားပုံ ရေးသားဟန်၊ တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အတွင်းသရုပ်လို့ဆိုရရင် ရည်ရွယ်ချက် အပါအ၀င် ဘလော့ခ်ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ တီထွင်မှု၊ သိမှု၊ ခံစားမှု၊ အတွေးအခေါ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု စေတနာတွေဟာ ဘလော့ခ်တစ်ခုကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့တဲ့ စာဖတ်သူ (၀ါ) ပရိသတ် (၀ါ) ဘလော့ခ်ကွန်မြူနတီတွေဆီကို ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ခ်ကွန်မြူနတီတွေရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတွေကနေတဆင့် ဘလော့ခ်ရေး သားသူ ဘလော့ခ်ဂါဆီသို့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတွေ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ်လို့ ယူဆလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ “
“တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လူဘောင်တစ်ရပ်ကို သွားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရင်း” ဆက်လက်အားပေးလျက်ပါ…